Shwe Taung Group | iMyanmarHouse.com
ဤကုမ္ပဏီ၏ Link => www.imyanmarhouse.com/shwe-taung
Shwe Taung Group မှ ဆောက်လုပ်သော Project များ
Hilltop Vista Condominium ကို Shwe Taung Real Estate မွအလံုျမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ေဆာက္ထားပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အခ်က္အခ်ာက်ေသာေနရာတြင္ တည္ရွိျပီး ဗဟို အမိ်ဳးသမီးေဆးရံု ၊ Tawwin Centre ၊ Sein Gay Har ၊ တရုတ္သံရံုး ၊ ထိုင္းသံရံုး ၊ Asia Royal Hospital အစရွိသည္တုိ႕ႏွင့္ အနီးဆံုးတြင္တည္ရွိသည္။ Situated in the heart of Yangon City Centre amidst...
Crystal Tower ကို Shwe Taung Real Estate မှ ကမာရွတ်မြို့နယ်တွင် တည်ဆောက်ထားပါသည်။ ရန်ကုန်မြို့၏ အချက်အချာကျသောနေရာတွင် တည်ရှိပြီး အာရှစိမ်းလန်းဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်၊ နိုဗိုတယ်ဟိုတယ်၊ မြန်မာ့အသံနှင့်ရုပ်မြင်သံကြား၊ ရန်ကုန်ဆေးတက္ကသိုလ်(၁)၊ တီတီစီ အထက်တန်းကျောင်း...
Crystal Residence သည် နာမည်ကျော် Junction Square နှင့် ကပ်လျက် ကမာရွတ်မြို့နယ်တွင် တည်ရှိပြီး Shwe Taung Real Estate မှ တည်ဆောက်ထားပါသည်။ အာရှစိမ်းလန်း ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်၊ နိုဗိုတယ်ဟိုတယ်၊ မြန်မာ့အသံနှင့်ရုပ်မြင်သံကြား၊ ရန်ကုန်ဆေးတက္ကသိုလ်(၁)၊ တီတီစီ အထက်တန်းကျောင်း...
Malikha Garden Housing မလိခအိမ်ရာသည် ရတနာလမ်း ၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်တွင် တည်ရှိပြီး Shwe Taung Real Estate မှ တည်ဆောက်ထားပါသည်။ မြေဧက (77741 sqft) ကျယ်ဝန်းသည်။Towers (၄) လုံးတည်ဆောက်ထားသည်။Tower A & B - 8 LevelsTower C &D - 12 Levels Facilities Drop - off area Fun & Wading Pool Swimming Pool BBQ Changing Room Landscape Pavilion Children Playground Function Room Location
Twin Centro ကွန်ဒိုသည် စမ်းချောင်းမြို့နယ် ၊ ဗဟိုလမ်းမပေါ်တွင် တည်ရှိပြီး Shwe Taung Real Estate မှ တည်ဆောက်ထားပါသည်။ Facilites Car Parking Lift Gym Swimming Pool Generator Security Internet Location Map
Ahlone Tower , Ground Floor , Stand Road , Ahlone Township , Yangon , Myanmar.
Shwe Taung Group ၏ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်